'ओली सरकार असफल भयो'
'ओली सरकार असफल भयो' - Nepal Talk
‘ओली सरकार असफल भयो’
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान शनिवार सकिएको छ। पहिलो चरणको अभियान सकिँदा लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी भइ रहेको छ। पार्टी संचालनमा नेतृत्वको शैलीको विरोध पनि भइ रहेको छ।
अर्को तिर सरकारका गलत कामको खबरदारी पनि प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आलोचन भइ रहेको छ। यिनै विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
गुट उपगुटले किन नेपाली कांग्रेस ग्रस्त भयो ?
गुट नभएको पार्टी कहाँ छ र ? पार्टी भित्र अलि अलि विवाद र द्धन्द्ध हुनु स्वभाविक नै हो। तर कांग्रेसको बारेमा अनावश्यक हल्ला गरिएको छ। जीवन्त पार्टीमा समुह-समुहबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। अलि अलि जालझेल पनि भइ रहेको होला। स्वार्थका खेलहरु भइ रहेका हुन्छन्।
तर पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने गुटगत राजनीति त राम्रो हुँदैन नि ?
सबै नेताहरु मिल्नुस् त सबैले भन्छन्। मिल्ने कुरा राम्रो हो। तर मिल्नका लागि आधार चाहियो। पार्टी भित्र न्याय र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो मान्यता सबैलाई चित्त बुझेको छ। पार्टीका सबै काम सही समयमा सही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो। कार्यकर्ताको चाहनालाई मैले आत्मसात गरेको छु, अरुले पनि गुर्नु पर्यो।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानले कार्यकर्तामा उत्साह दिन सकेन नि ?
तर पनि समग्र रुपमा राष्ट्रिय जागरण अभियान सफल भएको छ। नेताहरु देश भरी खटिए। कार्यक्रमहरु राम्रा भएका छन्। देश भरी छलफल, प्रशिक्षण र बहस सम्पन्न भएको छ। यसले देश भरी कांग्रेसको चहलपहल छाएको छ। चुनाव हारेको पार्टी भएकाले कार्यकर्तामा केही निराशा हुन सक्छ।
यद्यपी अहिले कार्यकर्ता सक्रिय भएर लागेका छन्। पछिल्लो समय म करिब २० जिल्ला पुगेँ। म गएको ठाउँमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता र जनताको उपस्थिती पाएँ। यसले पार्टी भित्र लहर छाएको स्पष्ट हुन्छ। कार्यकर्ता पनि उत्साहित देखिएका छन्।
नेताहरुमा अझै पनि चेत खुलेन भन्ने गुनासो त आइरहेको छ नि ?
कार्यकर्ताले तपाईसँग मात्रै होइन, मसँग पनि कुरा गरेका छन्। धेरै कार्यकर्तासँग साक्षात्कार गरेँ। साथीहरुलाई पार्टीको चिन्ता छ। पार्टी बलियो हुनु पर्यो, प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने चाहना छ। जनताले चाहे जस्तो पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ। मैले पनि कार्यकर्तालाई जनतामाझ जान अनुरोध गरेँ। जनताको स्वार्थसँग मिल्ने र सुख–दुःखको साथी बन्ने अभियानमा कार्यकर्तालाई लाग्न सुझाब दिएको छु।
शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वले कांग्रस हाँक्न सक्छ त ?
यो कुरा उतै नेतृत्व तिरै सोध्नुस्। डाडु पनिउ हातमा हुनेलाई नै सोध्नुस्।
अबको महाधिवेशन समयमा नै हुन सक्छ त ?
हुनुपर्छ। सबै कार्यकर्ताको चाहना पनि त्यही छ। गाउँगाउँका निकाय समायोजना र पुनर्गठन गर्नु पर्नेमा सबै कार्यकर्ताले जोड दिएका छन्। प्रदेश समितिहरु हुनु पर्यो भन्ने सबैको माग छ। संघीयताको स्वरुपमा पार्टीलाई लैजानका लागि समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले त समयमा महाधिवेशन हुँदैन भन्नु भएको छ नि ?
मैले उहाँलाई आरोप लगाउने कुरा होइन। तर उहाँको कुरामा मेरो सहमति छैन। समयमा महाधिवेशन गराउनु भएन भने कार्यकर्तालाई उहाँले नै जवाफ दिनुहुन्छ। समयमा महाधिवेशन नहुने हो भने त पार्टी बेहाल भइहाल्छ नि।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार चाँडै नै असफल हुँदैछ। अब विकल्पको रुपमा कांगेसले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि पार्टीको सबै काम र प्रक्रिया समयमा नै हुनु जरुरी छ। अब कांग्रेस तयार भएर बस्नुपर्छ। समयमा नै महाधिवेशन भएन भने आगामी निर्वाचन प्रभावित हुन्छ। पार्टीको महाधिवेशन र आम चुनाव एकैचोटी भयो भने कांग्रेसको विजोग हुन्छ।
तर अपेक्षा गरिए जस्तो कार्यकर्ताको उपस्थिती त देखिएन नि ? सरकारले गरेका नराम्रा कामको विरोध गरेको पनि पाइएन।
कार्यकर्ता पर्याप्त थिए। सरकारका गलत कामको विरोध पनि भयो। सरकारले आफ्नो हात जगन्नाथ गर्यो, पक्षपातको शाषन गर्यो भन्ने विषयमा आवाज उठेका छन्। बजेट आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँड्न खोज्यो भन्ने जस्ता विषयमा देश भरीबाट खबरदारी भएको छ। कार्यकर्ताको नियत नै ठीक छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरु सडक आन्दोलनमा छन् । कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
कांग्रेसले सबै खाले स्वतन्त्रताका विषयमा बोलि रहेको छ। सडक र सदन दुवै ठाउँमा कांग्रेस चुप लागेर बसेको छैन। यही रवैया जारी रहे कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छ।
हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नका लागि कांग्रेस तयार भएको हो ?
अब नेपाली कांग्रेस कुनकुन नेताहरुले हिन्दुराष्ट्र खोजेका छन् त्यो मलाई थाहा छैन। कांग्रेस कमल थापा र पशुपति शमशेरको बाटोमा जाँदैन। न त विप्लवको बाटोमा नै जान्छ। कांग्रेस आफ्नै बाटोमा हिँड्छ।
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हामी हिंसालाई अभिनन्दन गर्दैनौँ। हिंसाको बाटो छोड्नुपर्छ। हिंसा भनेको त गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताको विरुद्ध हो। के गर्न खोजेको हिंसा गर्नेले ? विना हात हतियार शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न जसले पनि पाउँछ, तर बम पड्काउने र हिंसा फैलाउने काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन।